Olee Email Na-ejikọ Multi-Channel Marketing | Martech Zone
N'oge a, ahia dị iche iche. Site na blọọgụ na mgbasa ozi mmekọrịta na infographics na email, ọ dị mkpa na ozi anyị niile na-agbanwe agbanwe. Anyị achọtala ọtụtụ afọ email ahụ bụ isi nke otutu ahia ahia.
Anyị na ndị enyi anyị rụkọrọ ọrụ na Delivra iji mepụta ihe omuma a banyere otu email si enyere ndị ahịa aka ime ka ozi ahịa ha sie ike ma zọọ ahịa. You maara na 75% nke ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na-ele email anya dị ka ozi ha họọrọ nke nkwurịta okwu na ụlọ ọrụ? Nke ahụ buru ibu. Email bụ ikike ịdabere na ikike, nke pụtara na onye na-azụ ma ọ bụ atụmanya nwere ike kpebie itinye aka na usoro nke aka ha. Iji usoro a mee ihe n’ụzọ ziri ezi nwere ike ime ka mgbanwe dị mma, ọkachasị mgbe ị na-ekwe ka atụmanya họrọ ma họrọ otu ha chọrọ itinye aka.
Nsogbu Mgbasa Ozi Email
Otu n'ime nsogbu ndị anyị nwere bụ ịdebe ahịa email anyị. Anyị nwere hiatus ahịa ịre ahịa email n'afọ a na usoro ọrụ anyị niile, mana n'oge na-adịbeghị anya anyị malitere izipụ ha ọzọ. Igodo nke email ahịa bụ inwe ụbọchị na oge ị ga - eziga ozi ịntanetị gị. Hazie oge na kalenda gị iji jide n'aka na ị nwetara ọdịnaya na imewe gị maka mkpọsa email gị n'izu ahụ. Mepụta kalenda ọdịnaya, isiokwu maka ozi ịntanetị gị, na ụzọ iji melite email gị. Hazi atụmatụ na-eduga n’ọrụ.
Ọ bụrụ na ị naghị eji ahịa email, mgbe ahụ ị kwesịrị ilebanye anya na pịa pịa na njikọ aka ị nwere ike ịla n'iyi. Chee echiche banyere ya - ọtụtụ mmadụ na-elele email ha kwa ụbọchị. Kedu ihe kpatara na ị naghị eji ahịa email? Kedụ ka ị ga - esi jiri ahịa email? Ndị a bụ ụfọdụ ajụjụ ị kwesịrị ị na-ajụ onwe gị dịka nzukọ.
Kedụ ka ị si eji email n'ime ọrụ ịre ahịa ọtụtụ ọwa?
Tags: mgbasa ozi ahịaCampaignsemail MarketingInfographics Ahịaotutu ahia ahia
Ndị uwe ojii na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze na-akụkwa ọzọ!
Jenụwarị 9, 2013 na 7:26 PM
Daalụ maka ikenye a Jenn!
Ebe obibi Edward
Ezigbo infographic, mana m ga-ekwu na email bụ ọwa nke aka ya, data ndị ahịa bụ ihe na-ejikọ ọwa ọnụ.